Myat Shu - ပေးစာ
You are here : Myat Shu » Archives for ပေးစာ
မသိခြင်းကိုသာ သိတဲ့သူ (သားသို့ပေးစာ – ၁၃)
Published By Myat Shu On Tuesday, April 2nd 2013. Under မျက်ရှု, ပေးစာ
Picture: www.telegraph.co.uk ချစ်သောသားလေးရဲဝဏ္ဏ သည်နေ့ ဖေဖေ့ရုံးခန်းကို (…. )ဂျာနယ်က အကြီးတန်းသတင်းထောက်ဆိုတဲ့ ကလေးမလေး တစ်ယောက် ရောက်လာတယ်။ သူ့လိပ်စာကဒ်လေးပေးပြီး ဖေဖေ့ကိုမိတ်ဖွဲ့တယ်လေ။ ဂျာနယ်အတွက် သတင်းရေးမလို့ပေါ့သားရယ်။ အဲသည်ကလေးမလေးက သူ့မှတ်စုစာအုပ်လေးထုတ်ပြီး အသင့်ရေးလာတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို ဖတ်၊ ဖေဖေ ပြောတာကို အသံဖမ်းစက်လေးနဲ့ ဖမ်းတယ်လေ။ ဖဖေသတိထားမိတာက ဖေဖေပြောတာ၊ ဖြေတာကို သာမှ မှတ်ချက်မပေး၊ ဝေဖန် ဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိတာဘဲ သားရယ်။ အခု ဖေဖေတို့ မီးရထားဌာနက အသစ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ လှိုင်သာယာ ဘူတာနဲ့ ပုသိမ်ရထားလမ်းမှာ ဘယ်ဘူတာတွေ ဆောက်ထားပါသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖေဖေသိရသလောက် ပြောပြခဲ့တယ်။ ဓနုဖြူ၊ ပန်းတနော်ဘူတာတွေက ဘယ်တိုင်းထဲမှာလဲတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းထဲက အထင်ကရ မြို့ကြီးတွေကို အဲသည် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Monday, April 2nd 2012. Under မျက်ရှု, ပေးစာ
ချစ်သောသားလေး... ရဲဝဏ္ဏ ၁ဝ တန်း စာမေးပွဲတွေလည်းပြီး၊ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်တွေလည်း ပိတ်တဲ့အပြင် သင်္ကြန်နားနီးပြီဆိုတော့ မကြာမီမှာ ရုံးတွေ၊ အလုပ်ရုံတွေ၊ ကုမ္ပဏီတွေလည်း ရက်ရှည်ပိတ်ကြတော့မယ်လေ။ ဒီတော့ ရုံးအားရက် ခရီးထွက်တဲ့သူတွေ များလာကြပြီပေါ့ သားရယ်။ တစ်ချို့က မိဘရပ်ထံ၊ တစ်ချို့ကျတော့ မိတ်ဆွေတွေဆီ၊ တစ်ချို့က အပန်းဖြေဘုရားဖူး စသဖြင့် ခရီးသွားကြတာ မဟုတ်လား။ ကားဂိတ်တွေလည်း ကားဂိတ်တွေလည်း ဘွတ်ခ်ကင်တွေပြည့်၊ ရထားတွေမှာလည်း တင်းကြမ်းဖြစ်နေတာပေါ့သားရယ်။ တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စ မဟုတ်ဘဲ အသင်းအဖွဲ့လိုက် ခရီးထွက်ကြတဲ့သူတွေကလည်း များများ၊ ဖေဖေ့မှာလည်း ရထားလက်မှတ် စီစဉ်ပေးရတဲံ မှတ်တမ်းတင် white board မှာ ပြည့်လို့ နောက်ထပ် တစ်ခုထပ်ပြီး စီစဉ်ရတယ်။ ဖေဖေရဲ့ စာပေမိတ်ဆွေတွေ၊ ... Continue Reading